Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maraykanka oo Congress-ku Su’aalo Waydiiyeen – Radio Daljir
Juunyo 14, 2017 4:01 b 0
Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Jeff Sessions, ayaa golaha Congress-ka hortiisa ka beeniyey in uu kullamo sir ah kula yeeshay saraakiil Ruush ah hudheel ku yaal magaalada Washingto DC.
Sarkaalkan ugu sareeya waaxda garsoorka ee Maraykanka ayaa sidoo kale guddida sirdoonka Senate-ka u sheegay in hadal kasta oo odhanaya wuxu gacansaar hoose la lahaa Kremlin-ku “yahay been laga yakhyakhsoodo”.
Hadalladiisani waxay ku soo beegmeen maalmo uun ka dib markii madaxii FBI-da, James Comey, sheegay in uu rumaysanyahay in sababta shaqada looga eryey tahay in baadhitaanka lagu hayo xidhiidhkaa la sheegay in Ruushka lala lahaa lagu marin habaabiyo.
Laamaha sirdoonka Maraykanka ayaa rumaysan in Ruushku farageliyey doorashadii dalkaa ka dhacday si ay gacan uga gaystaan in Madaxweyne Donald Trump la doorto.
Guddida Senate-ka ayaa ka mid ah dhawr guddi oo ka tirsan Congress-ka oo la shaqaynaya qareenno gaar ah oo baadhaya in ay saraakiil ka tirsan guddidii ololaha Trump si qarsoodi ah uga la shaqaynayeen Kremilin-ka khidaddaa uu maleegay iyo in kale.
Sessions wuxu sheegay in aanu marnaba kala hadal agaasimihii hore ee FBI-da, oo sida sharcigu dhigayo hoos taga xafiiska xeer ilaaliyaha, shaqadiisa iyo kartidiisa toona ilaa intii uu Trump shaqada ka qaaday bishii May.
Dhawr xubnood oo ka mid ah aqalka Senate-ka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka cadhooday in Sessions si isdaba jooga u diiday in uu ka jawaabo su’aalo la xidhiidha hadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha, waxaanay ku eedeeyeen in uu caqabad ku yahay baadhitaanka lagu hayo arrintan Ruushka.
Millatariga Sucuudiga oo Sameeyey Dhoolatus Ballaaran (daawo)